Ujyaalo Sandesh | » पहुँचवालालाई मात्रै हेलिकोप्टर ! पहुँचवालालाई मात्रै हेलिकोप्टर ! – Ujyaalo Sandesh
पहुँचवालालाई मात्रै हेलिकोप्टर !
२८ पुस (जाजरकोट)
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि कुशे गाउँपालिका–७, समाइलाकी २५ वर्षीया शर्मिला विक घरंगा स्वास्थ्य चौकी पुगिन् । उच्च रक्तस्रावका कारण शर्मिलाको स्वास्थ्य थप जटिल बन्दै गयो । २ दिनसम्म सुत्केरी हुन नसकेपछि उनलाई थप उपचारको लागि पुस २१ मा जाजरकोट जिल्ला अस्पताल रिफर गरियो । गाउँबाट जिल्ला अस्पताल पुग्न गाडी भाडामात्रै १५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो ।
कुशे गाउँपालिका–६, तप्रेनाकी २२ वर्षीया जेनिसा खड्का पनि सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि ३ दिन घरंगा स्वास्थ्य चौकीमै भर्ना भइन् । जेनिसाको समस्या पनि शर्मिलाको जस्तै उच्च रक्तस्रावकै थियो । स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुने अवस्था नदेखिएपछि उनलाई आइतबार जिल्ला अस्पतालमा रिफर गरियो । उनको अवस्थाको गम्भीरतालाई हेरी जिल्ला अस्पतालले बिहीबार नेपालगन्ज रिफर गरेको पति लोकबहादुर खड्काले बताए ।
सरकारले दुर्गमका गर्भवतीलाई सुरक्षित रुपमा सुत्केरी गराउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि जेनिसा र शर्मिला दुवैले यस्तो सुविधा लिन पाएनन् । सत्तामा पहुँच भएकालाई मात्रै त्यस्तो सुविधा मिल्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यस्ता सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगाउन परिवारले महँगो धनराशी खर्च पनि गर्छ । तर, गाउँमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा नहुँदा उनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ । यसकारण पनि जेनिसा र शर्मिलाका परिवार आफूलाई पहुँच नहुनेमध्येमै लिन्छन्न्।
कुशे र बारेकोट गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिकाका कतिपय जटिल प्रकृतिका सुत्केरी महिलालाई हेलिकोप्टरको सहायताले सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुर्‍याएर ज्यान जोगाइएको पनि छ । पहुँचवाला सुत्केरी महिलाले मात्र हेलिकोप्टरबाट तत्काल उपचारमा जाने सुविधा पाउने गरेका छन् । ‘असहाय गरिब भन्ने कुरा मात्र छ, नेता वा पहुँचवालाको नजिकका महिलाले उक्त सुविधा पाउँछन्,’ स्थानीय कालीबहादुर शाहीले भने, ‘पहुँच नहुने सुत्केरीको अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ ।’
दुर्गमका स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त जनशक्ति, उपकरण, भवनलगायत पूर्वाधार अभाव छन् । घरंगा स्वास्थ्यचौकी बनेको छ । घरंगामा तालिम प्राप्त जनशक्ति, भवन तथा उपकरण नहुँदा त्यस क्षेत्रका जटिल प्रकृतिका सुत्केरी महिलालाई बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य चौकी करार स्वास्थ्यकर्मीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसमाथि स्वास्थ्य चौकीको निर्माणाधीन भवन ७ वर्षदेखि अलपत्र छ । भवन अभावले उपचार सेवामा कठिनाइ भएको अनमी तारा सिंहले बताइन् । ‘सामान्य सुत्केरी गराउनुबाहेक अन्य जटिल अवस्थाका बिरामी आइहाले रिफर गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् । पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जन सुत्केरीलाई रिफर गरिएको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा सुत्केरी हुन नसकी ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्दो छ । जनचेतनाको अभाव, गर्भ जाँच तथा सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा नआउने, परम्परागत तवरले घरमै सुत्केरी गराउने, पोषणमा ध्यान नदिने, बालविवाह गर्ने, छोरीको आशमा धेरै सन्तान जन्माउनेजस्ता कारणले महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरको जाजरकोट अस्पतालकी अनमी नारायणी शाह बताउँछिन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाबाहिर असुरिक्षत रुपमा सुत्केरी हुने अधिकांश महिलाको ज्यान जोखिममा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘असुरक्षित तवरबाट सुत्केरी गराइएका कारण साल अड्किने, उच्च रक्तस्राव हुने समस्या देखिने गरेका छन् ।’
अधिकांश सुत्केरी महिलालाई अस्पताल लैजानुको साटो घरमै असुरक्षित तबरले जबरजस्ती सुत्केरी गराइने गरिएको पाइन्छ । शिशुको नाभी काट्न गाउँले हतियारको प्रयोग हुन्छ, जसले आमा र सुत्केरीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा वर्षेनी ४० प्रतिशत महिला असुरक्षित सुत्केरी हुने गरेको तथ्यांक छ । कान्तिपुरबाट